ကျမတို့နေတဲ့ဆင်းရဲသား ရပ်ကွက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျမတို့နေတဲ့ဆင်းရဲသား ရပ်ကွက်
Posted by မိုခ်ိဳ on Mar 31, 2012 in Creative Writing | 15 comments
ဆင်းရဲသားရပ်ကွက် ဆိုလို့ ကလေးတွေက နှပ်ချီးတွဲလောင်း ဖင်ဟောင်းလောင်း ၊ယောက်ျားတွေက အရက်ဆိုင် မှာ ခွက်ကိုင်လို့ မိန်းမတွေက အတွက်ပိုင်ပိုင် နဲ့ အကွက်တွေ ကိုင်နေကြတဲ့ ကလေးက ဆူဆူ၊ ခွေးကအူအူ၊ အကြွေးကထူထူ ရပ်ကွက်လေးကို ပြေးမမြင် လိုက်ပါနဲ့။ ကျမ ခဏတာ နေထိုင်နေတဲ့ ခြင်္သေ့မြို့တော်ရဲ့ တနေရာမှာရှိတဲ့ တိုက် လေးလုံး စု အကွက်လေး ကို ပြောတာပါ။
အဲ.. မစ္စတာ လီကွမ်ယု ကြီး များ မတော်တဆ ဖက်မိ ရင် သူတည်ထောင် ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံမှာ ဆင်းရဲသား ရပ်ကွက် ရှိတယ် လို့ ရေးတဲ့ကျမကို စိတ်ဆိုးပြီး တရားဆွဲ မှာလည်း ကြောက်မိပါတယ်။ ကျမတို့နေတဲ့ ရပ်ကွက်ကို စင်္ကာပူရဲ့ ဆင်းရဲသား ရပ်ကွက် လို့ခံစားရမိတဲ့ အချက်တွေ ကို ပြောပြပါ့မယ်။
ကျမတို့ နေထိုင်တဲ့ တိုက် တွေဟာ ဟောင်းနွမ်းနေပြီ ဖြစ်လို့ ဆက်လက် ပြီး လူနေထိုင်ခွင့် မပြုတော့ပဲ ဖြိုဖျက် ပစ်ဖို့အတွက် (HDB) Housing & Development Board ကသတ်မှတ် ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီက တိုက်တွေ က နည်းပညာပိုင်း အရ ခိုင်ခံ့မှုကို နှစ် တစ်ရာ ထိအာမ ခံ ထားပေမယ့်၊ နေထိုင်ခွင့် မပြုတော့ပဲ ဖြိုမယ် ဆိုတဲ့ တိုက်တွေ ရဲ့ သက်တန်း ဟာ စင်္ကာပူ တည်စကတည်း က ဆောက်ခဲ့တာ ဆိုရင်တောင် ဘယ်လိုမှ နှစ် ၅ဝ မကျော် နိုင် သေးပါဘူး။
တိုက်မှာနေတဲ့ မူလပိုင်ရှင် တွေကို တိုက်သစ်တွေမှာ အစားပြန်ပေးတယ်၊ အလိုက် နည်းနည်း ပေးရ ပေမယ့် အရစ်ကျ ဆိုတော့ ကျေကျေနပ်နပ် ဖယ်ပေးကြတာပါပဲ ။ မဖြို ခင် စပ်ကြားမှာ တိုးလာတဲ့ လူဦးရေ အတွက် (HDB) က ခဏ နေထိုင်ခွင့် ပြန်ချပေးတယ်။ ပိုင်ရှင်မရှိတော့တဲ့ တိုက်တွေ ကို ကုမ်ပဏီ တခုက ကန်ထရိုက် ပြန်ယူပြီး renovate နည်းနည်းပါးပါး လုပ်ပြီး ဈေးသက်သက်သာသာ နဲ့ပြန်ငှားတယ်။ ၃ နှစ်ကျော်ကျော် လောက် ငှားပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး လာမယ့် ဩဂတ်စ် ဆိုရင် ဆက်မငှားပေးတော့ပဲ (HDB) က တကယ် ဖြိုပြီးအသစ် ပြန်ဆောက် တော့မှာ လို့ဆိုပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကျမတို့ တိုက်တွေ မှာနေတဲ့ သူတွေ က အိမ် ပိုင်ရှင် တယောက်မှ မပါ ပါဘူး။ အားလုံး အိမ်ငှား တွေ ချည်းဖြစ်တဲ့ အပြင် ဒီမှာ အလုပ်လာလုပ်တဲ့ pass အမျိုးမျိုးနဲ့ နေကြတဲ့ နိုင် ငံခြားသား မိသားစု တွေ ပဲများပါတယ်။ စင်္ကာပူ နိုင်ငံသား အနည်းအကျင်း ရှိပေမယ့် အိမ်မဝယ်ရသေးတဲ့သူ ၊ အိမ်ရှိရင်လည်း ကိုယ့်အိမ်ကို ပေါက်ဈေးနဲ့ ငှားပြီး ဒီမှာ နည်းနည်းသက်သာ တဲ့ဈေးနဲ့ ပြန်ငှား နေကြတဲ့သူတွေ ၊ ပြောရရင် ဝင်ငွေ နည်းတဲ့သူတွေ ပဲဖြစ်တယ်။
တိုက်အောက်က ကား ပက်ကင် တွေကို ကြည့်လိုက်ရင် တခြား တိုက်တွေရဲ့ ကား ပက်ကင်တွေလို လူစီးကား လှလှ သစ်သစ် လေးတွေ သိပ်မရှိပဲ ဝန်ထမ်းတွေကို ကုမ်ပဏီ ကပေးထားတဲ့ကုမ်ပဏီ တံဆိပ် ပါတဲ့ ကားတွေပဲများပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဆင်းရဲသား ရပ်ကွက် လို့ ပြောချင်တာပါ။ ဖြိုမှာဖြစ်တဲ့အတွက် မဖြစ်မနေ လုပ်ပေးရမဲ့ ခြင်ဆေးဖြန်းတာတို့၊ မြက် ရိတ်ပေး တာတို့ကလွဲရင် တခြားတိုက်တွေလို ဓါတ်လှေကား အသစ် တပ်တာတို့၊ ကလေး ကစားကွင်း တွေ ပြင်တာတို့၊ လူသွားများတဲ့ နေရာတွေ ကို ကွန်ကရစ်ခင်းတာတို့ စင်္ကြန် လုပ်ပေးတာမျိုးတို့ မလုပ်ပေးတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကျမတို့ တိုက်တွေရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် မြင်ကွင်း ဟာ တခြား နေရာကတိုက်တွေ လောက် မပြည့်စုံ မသားနား ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တိုက်တွေရဲ့ အတွင်းအပြင် အနေအထားကတော့ အကောင်းကြီးပါပဲ။ သူတို့ က ဖြိုမယ် ဆိုပေမယ့် ကျမစိတ်ထဲမှာ နောက် အနှစ် ၄၀ လောက် တော့ကောင်းကောင်းကြီး နေလို့ရသေးတယ် လို့တွေး မိတယ်။
ငှားခဈေသက်သာတယ် ဆိုတော့ ကျမတို့ရွှေမြန်မာတွေနဲ့ ချစ်တီးကုလားတွေ အကြိုက်ပေါ့။ ကျမတို့ တိုက်တွေမှာ နေတဲ့ သူတွေကို ၃ ပုံ ပုံ လိုက်ရင် ၁ ပုံ က မြန်မာ၊ ၁ ပုံ က ကုလား ၊နောက် ၁ ပုံ က မှ တရုတ်၊ မလေး နဲ့ တခြားနိုင်ငံ သားတွေ အနည်း အကျင်း ပေါ့။ မြန်မာများတဲ့ အရပ်ဆိုတော့ မြန်မာ လို စကားပြောသံတွေ၊ ပိတ်ရက်တွေဆိုရင် မြန်မာ လို အော်ဟစ်ငြင်းခုန်သံတွေ၊ မြန်မာ သီချင်းသံတွေ၊ မြန်မာဟင်းနံ့၊ ငပိရည်နံ့၊ မုန့်ဟင်းခါး နံ့တွေ နဲ့ စည်ကားနေတတ်တယ်။ မြန်မာလို တစ်တစ် ခွခွ တွေ ဆဲဆို ရန်ဖြစ် ကြ တာလည်း မကြားချင်မှအဆုံး ။ တခါတခါ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စင်္ကာပူ မှာနေ နေတယ် ဆိုတာတောင် မေ့နေတတ်တယ်။
ကျောင်းပိတ်ရက်တွေ ဆိုလည်း မြန်မာကလေး တွေက ဦးဆောင် ပြီး ကလေးပေါင်းစုံ ဆော့ကြတာ ဗြောင်းဆန်နေတာပဲ။ တခုကောင်းတာက စင်ကာပူ နိုင်ငံသား အများစုနေတဲ့ တခြား တိုက်တွေလို ကွန်ပလိန်း မရှိဘူး။ ကလေးတွေပဲဆူဆူ၊ လူကြီးတွေပဲ ဆူဆူ၊ ဝုန်းဝုန်း ဒိုင်းဒိုင်းအသံတွေ ပဲ ထွက်ထွက် အားလုံးက အိမ်ငှားတွေ ချည်းပဲဖြစ်လို့ ကွန်ပလိန်း သိပ်မလုပ်ကြဘူး ။ အဲဒီတော့ ကျမတို့ရဲ့ ရပ်ကွက်လေးက ကျမ တို့ လို မျောက်လောင်းလေးတွေ ပါတဲ့ မိသားစုတွေ အတွက်တော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ နေပျော်ပါတယ်။
အောက်ကပုံတွေ ကတော့ ကျမတို့ နေ နေ တဲ့ ဖြိုတော့မယ် ဆိုတဲ့ တိုက်တွေပါပဲ။
ဖြိုတော့မယ်ဆိုတဲ့ တိုက်တွေ ကိုကြည့်ပြီး ဘာတွေ တွေး မိကြလဲ။
အပြင် ပိုင်း အမြင် ကတော့ တွေ့တဲ့အတိုင်း ပါပဲ ။အတွင်းပိုင်း အနေအထားကလည်း နေလို့ထိုင်လို့ အဆင်မပြေတဲ့ အချက်ကို ဘယ်လိုမှ ရှာမတွေ့တဲ့ ဒီ တိုက်တွေဟာ မကြာခင် ဖြိုတော့မှာ ပါလားလို့ စဉ်းစားမိတိုင်း ကျမအတွေးတွေ ပွားနေမိတယ်။
ကျမတို့ နိုင်ငံမှာ အက်သွားတဲ့ ကန်ထရိုက်တိုက် ကို ဘိလပ်မြေ နဲ့ဖာပေးတဲ့ အတိုင်း နေနေကြတဲ့ သူတွေ၊ အန္တရာယ် ရှိ အဆောက် အအုံ လို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ တခြားမှာနေစရာ မရှိလို့၊ ငွေကြေးမလုံလောက်လို့ မပြောင်းနိုင်တဲ့ သူတွေ၊ အန္တရာယ် ရှိ အဆောက် အအုံ အဖြစ်မ သတ်မှတ်ရ သေးလဲ ပြို ကျ သွားလို့သေသွားရတဲ့ သူတွေ၊ အမေစု ပြောသလို မီးရထားလမ်း တလျောက် မှာတွေ့ရတတ်တဲ့ အိမ်လို့တောင် ပြောလို့မရတဲ့ တဲ လေးတွေ ထဲက လူတွေ အကြောင်းတွေ တွေးမိတာပါ။
မြေနေရာ ပေါပြီး နေစရာ ရှားတဲ့ ကျမတို့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ နေစရာ ပေါလာမယ့် အချိန်တွေကို မျှော် တွေးမိရင်း။ ။
မှတ်ချက်။ ။ ကျမတို့ အိမ်ငှား စာချုပ်တွေ ကို ဩဂတ် ထိပဲ ပေးထားပါတယ်။ (HDB) ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် အရ ဆက်ငှားဖြစ် မငှားဖြစ် ကို အေပရယ် လ ထဲ မှာ အကြောင်း ပြန်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ကျုပ်တို ့ရပ်ကွက်ထဲမှာလဲ ရှေးတိုက်အိုတွေရှိတယ် ။ ရှေးတိုက်အိုလို ့သုံးရတာကတော့ ၊ လွတ်လပ်ရေးမရခင် ကတဲက ဆောက်ခဲ့တာမို ့။ ကြံ ့ခိုင်မှု ကတော့ လာမမေးနဲ ့၊ ပြီးခဲ့တဲ့၁ဝနှစ်အတွင်း ဆောက်ခဲ့တဲ့ ကန်ထရိုက်တိုက်တွေ ထက် အဆ၅ဝမက ပိုကြံ ့ခိုင်တယ် ။ သို ့ပေသည့် ဘယ်သူမှလဲ အရေးတယူလာမစစ်ပါဘူး ။ အငှားနဲ ့ပိုင်ရှင် ကိစ္စ ပြောပြရရင် ၊ တစ်ချို ့တိုက်အို ပိုင်ရှင်တွေဟာ သူရို ့အောက်ထပ်/မြေညီထပ်တွေမှာ ဆိုင်ခန်းတွေကန် ့ပြီးငှားစားခဲ့တယ် ။ အခု တိုက်ကို နယူးပြန်ဆောက်မယ်လဲ လုပ်ရော ။ ဒါမှမဟုတ် ရောင်းမယ်လဲ လုပ်ရော ။ ငှားနေတဲ့ ဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်တွေ နဲ ့ကွိုင်တွေရှုပ်ကုန်ပါရောဗျာ ။ ငှားခဲ့တာလဲ ဆယ်စုနှစ်ကျော်တွေချည်းလေ ။ ဆိုင်ခန်းနေရာကနေ ဖယ်ပေးစေချင်ရင် လျော်ကြေး သိန်းဆယ်ကြီးပိုင်း ( ၃/၄/၅ ဆယ် ကနေ ) ရာချီ တောင်းကြသတဲ့ဗျာ ။ ကျုပ်တို ့ဆီမှာ ဖြစ်ပုံ ကို မနေနိုင်လို ့ဝင်ငန်လိုက်သဗျား ။
မမိုချို သူများနိုင်ငံက ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်က တိုက်တွေက မြန်မာနိုင်ငံက ကွန်ဒိုတွေထက်တော့ အများကြီး သာနေပုံပါပဲ အော်….. ဒါကြောင့်လည်း ဟိုတစ်လောက အလုံမှာ တိုက်ကမြေနိမ့်ဆင်းသွားတာ အခုတော့ လူတွေ ပြန်နေနေသလိုပဲ….. ဒါတို့ရဲ့ပြည် ဒါတို့ရဲ့မြေ ငါတို့ကချစ်မြတ်နိုးရမယ် … အဟိ အဟိ
အဲဒီဖြိုမယ်ဆိုတဲ့ တိုက်တွေကို အလုံးလိုက် မြန်မာပြည် ပို့လိုက်ရင်ကောင်းမယ်။
ခြင်္သေ့ကျွန်းက ဖြိုချမယ့် တိုက်တွေနဲ့
ဂငယ်ကျွန်းက ရောင်ခြည်သင့်ကား၊ အမှိုက်ပုံက ကားတွေကို စီးနိုင်ရင်တောင်..
အာဂပါးစပ် လူဖြစ်ကျိုးနပ်တယ်လို့ ပြောသလို….
အာဂမြန်မာပြည်သား သူဌေးကြီး ဖြစ်ရချေသေးရဲ့…
အန်တီချိုက….. boonlay တဝိုက်ကများလား…… ကျနော့သူငယ်ချင်း၁ယောက်လဲ ပြောင်းရတော့မယ်….
တိုးတက်တဲ့ တိုင်းပြည်ဆိုတော့ လည်း အားကျစရာပေါ့နော်။ ကျမတို့ဆီကတော့ အခုမှ ကုန်းထ ကုန်းရုန်းရမဲ့ ဘဝဆိုတော့ ဘယ်လှမ်းလို့ မှီနိုင်မလဲနော်။
တနေ့တော့ပေါ့ အမရယ် သူများတန်းတူနေနိုင်တဲ့ ဘဝတွေကို မြင်ချင်ပါသေးတယ်။
ROCHOR လမ်းမကြီးဘေးက တိုက်တွေနဲ့တူလိုက်တာ..။
အခန်းပိုရအောင် အထပ်မြင့်ကြီးတွေပြန်ဆောက်မလို့ ထင်တာပါပဲ။
ထင်တာမမှားရင် ၁၉၈၀-၁၉၉ဝ အတွင်းဆောက်ထားတဲ့တိုက်တွေပါ။
စင်ကာပူတရုတ်မနဲ့ မလေးရှားတရုတ်မ ဘယ်သူပိုချောသလဲ သိချင်သား…။ ဓာ့ပုံရှိရင် တင်ပေးပါလား..။ စကပ်တိုတာ အကြောင်းမဟုတ်ဘူး…။
ကိုကိုကြောင့် ဆန္ဒအတိုင်း အမြန်ဆုံး ဖြည့်ပေးစေလိုပါကြောင်း ။ ဟီဟိ
ဆင်းရဲသား ရပ်ကွက် ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
အခန်း အများစုက Air-cond တပ်ထားတာ မတွေ့ရဘူး ။
စလုံး မှာ မီတာခ တော်တော် ဈေးကြီးတယ် ထင်ပါ့ ။
အဘကတော့ သက်တမ်း မကုန်သေးတဲ့
ဖျက်သိမ်းတာကို မကြိုက်ဘူး ။
သက်သက် သဘာဝ အရင်းအနှီးတွေကို ဖျက်ဆီးတာပဲ ။
ပိုက်ဆံ တစ်ခုတည်း စဉ်းစားတာ ၊ မ ယဉ်ကျေး တာပဲ ။
သဘာဝ ပါတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်းရေး သမားတွေက
ယူအက်စ်မှာတော့.. အဲလိုလုပ်နေတာတွေ နည်းပါတယ်.
နယူယောက်ရော.. အယ်လ်အေ..ဆန်ဖရမ်.. တိုက်တွေက.. အနှစ် ၄-၅ဆယ်အသာလေးနေတာ…
အကုန်လိုလို.. ကိုယ်ထက်ကြီးတာတွေချည်းပဲ.. (အသက်..မဟုတ်.. အရွယ်)
အိမ်တွေဈေးကျ/မရောင်းရတော့.. ကွန်စရပ်ရှင်အပိုင်းက လူတွေအလုပ်မရှိကြဘူးလေ..
အဲဒါနဲ့.. ကျုပ်နေတဲ့အပါ့မန့်နား.. တိုက်သစ်တွေဆောက်နေလိုက်တာမှ… အရမ်းပဲ..
ပြီးသွားရင်လည်း.. လူလည်းမရှိ..။ မငှားရ..
အဟား တီချိုရေဒါဆိုရင်တော့ပွတာပဲ အမြစ်ကဆွဲနှုတ်ပြီးမြန်မာပြည်ပြန်လာခဲ့ တီချိုတစ်ယောက်
ကျွန်တော်တို့အိမ် ရှမ်းပြည်သားနေတဲ့အိမ် မီးဖိုချောင်ထုပ်တန်းက ပိုးထိုးပြီးနှစ်ပိုင်ကျိုးနေပြီ
ပေလေးဆယ်ပေခြောက်ဆယ်ခြံဝန်းထဲမှာ အိမ်သာအဆောက်အဦးနှစ်လုံးရှိတယ် အဟောင်းတစ်လုံးက
နှစ်ကပြိုကျပေမယ့်ခုထိသုံးလို့ရတုန်းပဲ တစ်ခါတုန်းက အထဲကယင်ကောင်သားပေါက်ပိုးလေးတွေရွစိရွစိတက်
လာသေးတယ် ကြွေဆေးအက်ဆစ်နဲ့လောင်းချတာတောင်မသေဘူး ထုံးယိုးဒယားပုဇွန်ဆီပုံးဆယ့်သုံးပုံးလောင်းတယ် တက်လာတဲ့အညစ်အကြေးကျမသွားသေးဘူး နောက်တော့
ရေတွေလောင်းထည့်လိုက်တယ် အားလုံးဓါတ်ပြုပြီး အိမ်သာကျင်းကြီးခြောက်ပေလျော့သွားတယ် ခြောက်နှစ်
အိမ်နံရံတွေက 2004ဒီဇင်ဘာငလျင်ကြောင့်ခြောက်ချပ်လောက်ပြန်အစားထိုးထားတယ် အိမ်တောင်ဘက်က
အုတ်နံရံက တစ်ဘက်အိမ်က သစ်တုံးတွေနဲ့ထောက်ထားရတယ် … ဆယ့်ငါးဒီဂရီလောက်စောင်းနေလို့
ငလျင်ဒဏ်တုန်းကပေါ့ …… အိမ်ပါတ်လည်အုတ်တံတိုင်းနံရံကိုပြောပါတယ်….အုတ်နံရံဆိုတာ
အဲဒါတွေအားလုံးကိုသွားပြီနဲ့ကြည့် ခုထိကိုလှုပ်စိလှုပ်စိဖြစ်နေသေးတယ်…. နောက်ပြီးကျွန်တော့်အခန်း
ကုတင်အောက်ကကြမ်းပြင်ကြီးက သုံးလက်မလောက်ဟနေတယ်… အထဲကိုနှီးပြားဒါမှမဟုတ်
ဘူး…….. ပြောကြတာတော့တစ်မြို့လုံးက ဂလိုင်တွေပေါ်မှာတည်တယ်ဆိုသဗျ နောက်ပြီး မြို့အောက်
ခြေမှာ ခနောက်စိမ်းသတ္တုကြောရယ် ကျောက်မီးသွေးသတ္တုကြောရယ်….. ခဲမဖြူသတ္တုကြော်ရယ်
ဒီလိုဆိုတော့ကာ…. စင်္ကာပူကဗိသုကာများ …. တွက်ချေညံ့ကြသေးတယ်ပဲဆိုရမလားမသိနော်….
တီချိုမယုံးဘူးဆိုရင် ဓါတ်ပုံနဲ့တကွသက်သေပို့စ်တစ်ခုတင်ပြမယ် ပြင်ဆင်ခြင်းအလျဉ်းမရှိတဲ့ပုံနော်…
အန်တီ pooch နီတယ်နော် ဆင်တူလေး…. ….. ရဲနေတာပဲ…. why ??????
ဆင်းရဲသား ရပ်ကွက်က တိုက်ဒွေဂလည်း …
နာတို့ မြန်မာပြည်မှာ သဋ္ဌိန်းတွေနေတဲ့ တိုက်တွေလိုပါပဲလား … ဟရို့ …
ဘာဖစ်လို့ အဲဒါဂျီးတွေ ဖြိုချင်တာလဲဆိုတာ သိပါဘူး ..
တိုက်တွေကတော့ ရှယ်ပါပဲ … လို့ …
boonlay ကတိုက်တွေ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီ ခြင်္သေ့ ကျွန်း ကမြေကြီးရှားတော့သက်တန်း ကြာသွားတဲ့လူနေ အဆောက်အုံတွေ နေရာမှာ အသစ်တွေနဲ့ပဲ အစားထိုးချင်တယ် ထင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကအဆောက် အုံတွေ ကိုတော့ သမိုင်းဝင် အဖြစ် ဒီအတိုင်း ပဲထားပါတယ်။
နှမြောလိုက်တာ ဟုတ်ပါ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပို့လိုက်ပါလား နေစရာမရှိတဲ့သူတွေကိုပေးနေလိုက်ရရင် တော့မကောင်းရှိတော့မယ် အမလည်းဘုံပျောက်ပြီပေ့ါနော် သူတို့ကဖယ်ခိုင်းရင်တော့ ဖယ်ရမှာပေါ့လေ အမဘုံပျောက်ရင် မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန် လာခဲ့နော်